INGELOSI INANI 1010 INTSINGISELO + ISIMBOLI - INANI
Ingelosi Inombolo 1010 Intsingiselo yokomoya + uphawu
INTSINGISELO NGOKUTSHA 1010
Masiyiqhekeze le nto. Amanani 1 kunye no-0 ekuphindaphindweni kokwenza i-1010 amele umyalezo osemandleni amandla omabini la manani ayandiswa. Ukujonga emva kwiposti yebhlog malunga nengelosi inombolo ye-111, unokukhumbula ukuba inombolo ye-1 imele ukuba nantoni na esiyifaka kwi-Universe ibuyela kuthi- SINGABADALI benyani yethu. Xa la manani ephindaphindayo, oko kuthetha ukuba nokuba zeziphi na iingcinga zakho, iimvakalelo, isenzo kunye namandla owakhuphayo yile nto ngoku ibonakalisa ubomi bakho- ngesantya esikhawulezayo! Inombolo 1, 11, 111, kunye kunye no-1010, sisikhumbuzo esivela kwiingelosi zakho ukugcina isimo sengqondo esihle, esinethemba kwaye uya kuyiphumeza yonke iminqweno yakho. Vumela uloyiko okanye iingcinga ezimbi ngoku, unike naziphi na iinkxalabo kwi-Universe kunye neengelosi ukuba zikhathalele. Sitsala yonke into kubomi bethu njengeemagnethi kuba umthetho woMtsalane kwi-Universal uthi amandla, into, okanye imeko ofuna ukuyitsala kufuneka ibe ngumdlalo onamandla kumandla akho… kwaye u-1010 luphawu lokugcina iingcinga, amagama kunye nezenzo zakho zilungile. bonisa zonke izinto ozifunayo ukungena ebomini bakho.
Ingelosi inombolo 1010 luphawu lokuba uqhubele phambili, uthathe amanyathelo aphefumlelweyo, kwaye ungene kwinkululeko yakho. Ngoku lixesha elihle lokunxibelelana nesiqu sakho esiphakamileyo, (icandelo lakho elaziyo eyona ilungele wena ngawo onke amaxesha), yamkela ubuntu bakho, kwaye uthathe ixesha lokuzibonakalisa. Inombolo 1010 ikukhokelela kwindlela yakho yokufezekisa injongo yobomi bakho, kwaye uyaxhaswa ngelixa usakhula ngokomoya okanye ulandela izinto ezilula. Ngoku, kulapho i-0 ingena emfanekisweni. Inani u-0 ngokwalo limela ubunye obungenasiphelo. Kuyasikhuthaza ukuba siqonde ukuba SIYINxalenye yoMthombo kunye nabasunguli-maqabane bamava ethu. Xa u-1 no-0 bekunye luphawu lokujonga ngaphakathi (mhlawumbi ngeyoga, ukucamngca, okanye nantoni na ekunceda uthulise ingqondo yakho), kwaye umamele intuition yakho yeempendulo. Indalo iphela, isiqu sakho esiphakamileyo, kunye nezikhokelo zomoya ziyathetha nawe kwaye zifuna ukuba wazi ukuba uza okanye uza kufumana inguqu enkulu. Ingelosi engu-1010 imele ukuphela kunye nesiqalo. Ukuze uqhubele phambili, kufuneka ushiye elidlulileyo ngasemva, ngaphandle kokuba ukhe wasilela ngaphambili, kwaye uqhubeke phambili ngengqondo elungileyo.
Thembela ekwazini ukuba iimpendulo zemithandazo yakho kunye nexesha lokudakumba liyakwenzeka ngexesha elingcwele. Inqanaba ohamba kulo ngoku likuvulela amathuba angenasiphelo. Ngale nto ithethwayo, iingelosi zifuna ukuba uhlale ujonge ngokulandela into ibe nye kwaye uhlale kumzuzu wangoku. Oku kuyakukunceda uhlale phantsi, uzolile, kwaye uhambe nokuhamba kwalo mjikelo mtsha umangalisayo ebomini bakho. Konwabele ukukhwela!
yikristale ye-adventure eluhlaza
athetha ntoni amanani u-555
iinwele ezikwenza ubonakale umncinci
indlela yokulahla i-cellulite kwi-butt
Ungafumana njani incasa kunye nephunga kwakhona
Olona hlobo luphambili lwevenkile yeziyobisi kulusu olunamafutha